Back elu iTunes: otú nyefee Video, Music si iTunes ka Computer
> Resource> iTunes> otú nyefee iTunes Music ka ọzọ Computer
Ajụjụ: m na chọrọ ịkwaga m iTunes n'ọbá akwụkwọ si m ochie akwụkwọ ọzọ na kọmputa maka ọnwa. Ma, ọ bụ isi na-awa, karịsịa na ọtụtụ songs m n'ọbá akwụkwọ. Gịnị ka m kwesịrị ime, sịnụ, nyefee music si iPhone 5 na kọmputa?
Azịza: Iji nyefee music si iTunes n'ọbá akwụkwọ ọzọ na kọmputa, na i nwere abụọ mfe ụzọ ga-agbaso.
Ngwọta 1: Nyefee iTunes Library ọzọ kọmputa na mpụga ike mbanye
Ngwọta 2: Nyefee iTunes music ọzọ na kọmputa na TunesGo
Dị ka ị maara, ọ bụrụ na ị ibudata ma ọ bụ zuo music, videos, audiobook na ndị ọzọ si iTunes, iTunes ga-azọpụta ha na iTunes nchekwa na kọmputa gị. N'ihi ya, nyefee iTunes Library ọzọ kọmputa, ị nwere ike ikwunye n'ime ihe mpụga ike mbanye ma ọ bụ a USB flash mbanye na kọmputa, na, na, idetuo iTunes nchekwa na ya.
Firstly, Chọta iTunes nchekwa na kọmputa. Na Windows 7, ndị iTunes nchekwa a na-echekwa ebe a: C: \_ Ọrụ \_ Administrator \_ Music \_ iTunes. Ọ bụrụ na kọmputa gị na-agba ọsọ Windows XP, Vista ma ọ bụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịga na-ahụ iTunes nchekwa na yiri ịzọpụta ụzọ.
Nke abuo, ibudata ma wụnye iTunes na ọzọ na kọmputa. Ịnyagharịa ka ịzọpụta ụzọ nke iTunes nchekwa na nke a na kọmputa.
Thirdly, jikọọ mpụga ike mbanye ma ọ bụ USB flash mbanye na kọmputa. Mgbe ahụ, idetuo ochie iTunes nchekwa na-eji dochie ọhụrụ.
Ụzọ ọzọ na ndabere iTunes songs na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka a ọhụrụ kọmputa bụ iji Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Download a usoro gị na kọmputa na-enwe na-agbalị!
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori omume
Wụnye na ẹkedori a iTunes transfer ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo on gị ochie na kọmputa. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ochie na kọmputa site na eriri USB. Nke a na usoro ga-chọpụta gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ka anya dị ka ọ na-ejikọrọ. Mgbe ahụ, gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ga-emere ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Copy iTunes music si ochie na kọmputa na-iPhone / iPad / iPod
Na-aga "Playlist" ke hapụrụ kọlụm. Mgbe ahụ, playlist window egosi elu na nri. Pịa triangle n'okpuru "Tinye" iji bugote a ndọpụta ndepụta. Họrọ "Tinye iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ".
Site ndabara, niile listi ọkpụkpọ na-enyocha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ụfọdụ n'ime ha, uncheck gị achọghị listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, pịa "OK". Nke a na usoro amalite idetuo iTunes listi ọkpụkpọ na Fim, igwu egwu adabere na skips, wdg gị iPhone / iPod / iPad.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iTunes music ọzọ kọmputa
Mgbe ahụ, kwụpụta eriri USB na-abịa na gị iPod / iPad / iPhone na nkwụnye ya ọzọ na kọmputa na-eme ka a njikọ n'etiti na kọmputa na gị iPhone / iPod / iPad. Wụnye na-agba ọsọ a omume na ọhụrụ a na kọmputa.
Pịa "Playlist" ikpughe playlist window. Họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ dị naanị ugbu a wee pịa "Export ka". Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, ị ga-ahọrọ a zọpụta ụzọ na-echekwa ndị a listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, a usoro amalite nyefee iTunes ndetuta egwu ọkpụkpọ ka a na kọmputa. Echefukwala na-gị iPhone / iPad / iPod ejikọrọ n'oge nyefe.
Cheta na: TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado ọtụtụ Apple ngwaọrụ, dị ka iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Obere, na iPod aka 5. E wezụga, ị nwere ike nyefee ndị nkịtị na smart listi ọkpụkpọ n'etiti iPhone, iPod na iPad.
Nke ahụ bụ ụzọ idetuo music si iTunes music ọzọ na kọmputa. Ugbu a, ị nwere ike nyefee dị music ndị ọhụrụ iTunes na obi ụtọ.
Na-ekiri ndị video nkuzi na-akpụ akpụ iTunes music ọzọ na kọmputa.
Olee otú Hichapụ iTunes ndabere
A Full Nduzi na otú imelite iPhone na / enweghị iTunes
Olee otú Record Online Music na Nyefee na iTunes